2021 gunnada internship: inta ay le'eg tahay
Marka muddada tababarka ee isla shirkaddu ay ka badato laba bilood oo isku xigta, ama marka isla sannadkaas iskuul ama sannad jaamacadeed muddadaas ay tahay laba bilood oo isku xigta iyo in kale, tababarku wuxuu helayaa gunno, inta ay tahay waxaa lagu go'aaminayaa heshiiska laanta ama heshiiska xirfadeed ee la dheereeyey (C. waxbarashadda., art. L. 124-6).
Maqnaanshaha heshiis khuseeya, qadarka gunnada waa 15% of saqafka saacaddii ee Amniga bulshada.
Themagdhaw shaqo barashada waxaa la bixiyaa bil kasta waxayna ku eg tahay maalinta koowaad ee bisha koowaad ee stage.
Si loo go'aamiyo gunnada tababarka ee 2021, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la fiiriyo saqafka saacadda ee 2021 ee Lambarka Bulshada.
Dhibaatada caafimaadka awgood, qiimayaasha kala duwan ee saqafka Lambarka Bulshada lama beddelin sanadka 2021. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sababahan awgeed, waxaad la tashan kartaa maqaalka: Saqafka Dammaanadda Bulshada 2021
Saqafka saacadda ee Lambarka Bulshada ayaa weli loo dejiyay 26 euro sanadka 2021. Lacagta ugu yar ee saacaddii la tababarayo sidaas darteed waxay ahaaneysaa 3,90 euro 2021.
Tani waa inta ugu yar oo keliya taas
2021 gunno tababar July 10th, 2021Tranquillus
horeMaareynta Agile… Jawaabta degdegga ah ee dhibaatada, mise qaab waara?
socdaWarqad Muunad ah si looga tartamo mushahar bixinta